ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ကလေးများအပေါ်သက်ရောက်မှု။ အမေရိကန်ကလေးအထူးကုကောလိပ် (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
abstraction: အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်လူကြီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားတွင်နေရာအနှံ့အပြားတွင်ဖြစ်နေသည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ အပြုအမူနှင့်အကြမ်းဖက်ပြုမူမှု၊ ငယ်စဉ်ကန ဦး လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်း၊ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှု၊ ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအန္တရာယ်နှင့်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားဆက်ဆံရေးကိုလွဲမှားစွာရှုမြင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကွာရှင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ အမေရိကန်ကလေးအထူးကုကောလိပ်သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအားလူနာများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့်ကလေးများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများခံစားနေရသောတစ် ဦး ချင်းစီကိုကုသရန်အရင်းအမြစ်များကိုကမ်းလှမ်းရန်တိုက်တွန်းထားသည်။
ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများထဲမှာ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားစေရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းခေါ်ဆောင်သွားအပြုအမူများ၏ပုံဖော်တင်ဆက် (ဓာတျပုံသို့မဟုတ်စာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ display ကို)" အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။1 လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်ကလေးသူငယ်များအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုများများကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုရန်၊ တတ်နိုင်သော၊ ၎င်းသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ခလုတ်အနည်းငယ်နှိပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အွန်လိုင်းဆိုဒ်တော်တော်များများကကြည့်ရှုသူများအားသူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအခမဲ့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားဆိုဒ်များသည်တတိယပါတီ၏ဗီဒီယိုများကိုတင်ရုံဖြင့်ကြည့်ရှုသူအား ၀ က်ဘ်အသွားအလာအတွက်အခကြေးငွေမယူပါ။ ၎င်းသည်အမည်မသိဖြစ်ပြီးလူတစ် ဦး ၏အိမ်၏လုံခြုံမှုတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောစာအုပ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဒေသခံ XXX ပြဇာတ်ရုံသို့သွားရန်မလိုအပ်တော့ပါ။
အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဤတိုင်းပြည်များတွင်ထုတ်ပေးကြောင်းဝင်ငွေပမာဏအတိအကျမသိရသေးပေမယ့်အင်တာနက်ကို filtering ကိုဝန်ဆောင်မှုပဋိညာဉ်မျက်လုံးဟာ 2012 အမေရိကန်ဝင်ငွေန်းကျင် $ 8 ဘီလီယံအထိဖြစ်ခန့်မှန်းထားသည်။2 ဒါဟာ 2007 ကတည်းကဝင်ငွေ 50% အထိကျဆင်းသွားခဲ့သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်3သို့သော်ဤကျဆင်းမှုသည်အခမဲ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများရရှိခြင်းနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုလုံး ၀ ကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အင်တာနက်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် Hitwise တကမ္ဘာလုံး 40,634 ကို web sites များညစ်ညမ်းဖြန့်ဝေကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။4
တစ်ဦးက 2014 Barna Group မှစစ်တမ်းအမေရိကန်လူကြီးများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါတို့ကိုလူဦးရေဒေတာထင်ရှား:5
အဟောင်းကိုအထီး 18-30 နှစ်ပေါင်းများထဲတွင် 79% တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုတစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်ထက် သာ. ကြီးမြတ် 63% ကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်း။
အဟောင်းကိုအထီး 31-49 နှစ်ပေါင်းများထဲတွင် 67% တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုတစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်ထက် သာ. ကြီးမြတ် 38% ကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်း။
အဟောင်းကိုအထီး 50-68 နှစ်ပေါင်းများထဲတွင် 49% တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုတစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်ထက် သာ. ကြီးမြတ် 25% ကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်း။
အဟောင်းကိုအမျိုးသမီး 18-30 နှစ်ပေါင်းများထဲတွင် 34% တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု 19% ပိုမိုတစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်ထက်ညစ်ညမ်းရှုမြင်ကြသည်။
အဟောင်းကိုအမျိုးသမီး 31-49 နှစ်ပေါင်းများထဲတွင် 16% တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုတစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်ထက် သာ. ကြီးမြတ် 8% ကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်း။
အဟောင်းကိုအမျိုးသမီး 50-68 နှစ်ပေါင်းများထဲတွင် 5% တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုတစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်ထက် သာ. ကြီးမြတ် 0% ကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်း။
လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်အုပ်စုများနှင့်ဆင်တူသည်။ အတွက် 2008 ဆောင်းပါး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ် 67 လုလင်% နှင့်အမျိုးသမီးငယ်၏ 49% ညစ်ညမ်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။6 ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းကနေရာအနှံ့တွင်တွေ့ရသည်။ အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အကြားရှိအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားများအတွက် ၂၀၁၀ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရသုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးကသူတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည် ၁၀ နှစ်ပြည့်ပြီးငယ်သည်ဟုဆိုသည်။7 တစ်ဦး 2011 စစ်တမ်းများတွင်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ၏ 31% သာလျှင်လူကြီးအဖြစ်ရည်ရွယ်ခဲ့က်ဘ်ဆိုဒ်များကိုသွားရောက်လည်ပတ်ဝန်ခံခဲ့သည်။8 အမေရိကန်လူငယ်များ၏ကြီးမားသောစစ်တမ်းယောက်ျား၏ 51% ထင်ရှားနှင့်အမျိုးသမီး၏ 32% သူတို့ 13 နှစ်ရှိခဲ့ကြသည်ရှေ့တော်၌ထိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။9 ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ် 2012 သြစတြေးလျလေ့လာမှုများတွင်မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောသူတို့သညျသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုဟောင်းအနှစ် 11 မှ 13 ၏အသက်အရွယ်အကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။10 အလားတူတွေ့ရှိချက်တစ်ခု 2009 လေ့လာမှုတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ် အရာ 85 ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး% နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးများ၏ 50% ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။11 ရှင်းနေသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ခေတ်သစ်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ သို့ရာတွင်သုတေသနသည်ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိပစ္စည်းရှုမြင်သည့်အခါတန်းကျောင်းကကလေးတွေတစ်ခါတစ်ရံမတော်တဆညစ်ညမ်းထိတွေ့လျက်ရှိသည်။12 သူတို့ကအစမိဘတစ်ဦးရဲ့သို့မဟုတ်နီးစပ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရဲ့အညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ရောက်လိမ့်မည်။13 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ရည်ရွယ်ချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်မှုအတွက်အမြိုးသားအမြောကျမတို့၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့အညစ်ညမ်းမှကလေးငယျမြားထိတွေ့ပါပြီ။14 ထိုလူငယ်အသက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုမကြာခဏလေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှု။15 ကလေးများလည်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပြီးနောက်ရွံရှာ, ထိတ်လန့်, အရှက်, အမျက်ဒေါသ, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်ဝမ်းနည်းမှု၏ခံစားချက်များကိုသတင်းပို့ပါ။16 ဤကလေးများသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလက္ခဏာများအားလုံးခံစားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့တွေ့ခဲ့သည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုပြုမူကျင့်ကြံရန်စွဲလမ်းလာကြပြီး၎င်းသည်ဤအပြုအမူကြောင့်မျက်မြင်သက်သေသို့မဟုတ်ထိခိုက်ခံရသည့်ကလေး၏ရွယ်တူချင်းများအားအလွန်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသည့်အသက် ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးများသည်စာရင်းအင်းများအရသူတို့၏ရွယ်တူချင်းများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။17 ပေါင်းလဒ်များတွင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းထိတွေ့ကလေးများ maladaptive အပြုအမူတွေနဲ့ psychopathology ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးများအတွက်အန္တရာယ်မှာရှိပါတယ်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure နှင့်သုံးစွဲမှုဆိုးကျိုးများ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်လူငယ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ဒေါ့ဖ်ဇီလင်နှင့်ဂျင်နင်းဘရိုင်ယန်တို့၏လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ Zillman / Bryant လေ့လာမှုများကိုမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်စေသောအချက်များများစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာ၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကျပန်းလေ့လာမှုများကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းတို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများမရိုက်ကူးခင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့်တက်ရောက်သူများသည်ယနေ့ပျမ်းမျှလူငယ်အရွယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့မှုနည်းပါးဖွယ်ရှိသည် ဤလေ့လာမှုများတွင်ရပ်ကွက်မှကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်ကောလိပ်မဟုတ်သောကျောင်းသားများကိုစုဆောင်းခြင်းပါဝင်သည်။ စမ်းသပ်အဖွဲ့မှဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုခြောက်ပတ်ကြာကြည့်ရှုခဲ့ပြီးထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့သည်တချိန်တည်းတွင်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့မှုရှိခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်သင်တန်းသားများကိုဆက်ဆံရေးနှင့်မိသားစုပြissuesနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏သဘောထားကိုအကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်းများမေးခဲ့သည်။18
အောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိချက်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ငယ်ရွယ်လူကြီးများနှင့် ပတ်သက်. မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်:19,20
အထီးဘာသာရပ်များအမျိုးသမီးတွေဆီသို့တိုးချဲ့ရှိရာသို့ သွား. သရုပ်ပြခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များပိုပြီး Non-အိမ်ထောင်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလက်ခံနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပါးစပ်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံအဖြစ် Non-coital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ခဲ့ကြသည်။
ဘာသာရပ်များညစ်ညမ်းပိုပြီးအစွန်းရောက်များနှင့် deviant ပုံစံများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ထူးခြားသောပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအထောက်အထားရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရန်လိုမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများသည်မိန်းမများသည်မုဒိမ်းမှုအတွေးအခေါ်ကိုလက်ခံရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းမှာအမျိုးသမီးများသည်မုဒိမ်းမှုသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုခံစားခြင်းဖြစ်သည်။21,22 အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးဆယ်ကျော်သက်များတွင်လိင်ပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်23 နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျား။24 ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များအမျိုးသမီးနှုတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အဖြစ်အမျိုးသမီးတွေကို့လင်းလင်းရည်ညွှန်းစော်ကားသောဖြစ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူ vs. အထီးဖော်ကျူးရန်အဘို့အဒါဟာဘုံဖြစ်ပါတယ်။25 လူငယ်များအဘို့, ကြည့်ရှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုဒ်များကိုပြီးခဲ့သည့်သုံးလနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးများအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ရှိခြင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။26 ဆယ်ကျော်သက် sexting (ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံ, ရုပ်ပုံတွေ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း device ကို အသုံးပြု. e-mail များ၏ပေးပို့ခြင်း) ၏မကြာသေးမီဖြစ်ရပ်ဆန်းညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။27 အမြိုးသမီးမြားအဘို့, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုယောက်ျားအထီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခြယ်လှယ်စေနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်စအိုလိင်ကိုမနှစ်မြို့ဖွယ်ဟုယူဆကြသောအချက်အလက်များရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသောအမျိုးသမီးများသည်စအိုလိင်ဆက်ဆံမှုတွင်ပါဝင်မှုများလာခြင်းကဤအချက်ကိုထင်ရှားစေသည်။28
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ရုံလေ့လာဖို့စတင်နေကြသည်တစ်ခုထွန်းသစ်စပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အတွက်မကြာသေးမီကမူလတန်းသုတေသနဆောင်းပါး ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု လက်ျာ striatum အတွက်ဦးနှောက်အသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွားလက်ဝဲ striatum activation လျော့နည်းသွား, နှင့် prefrontal cortex မှနိမ့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသထားတယ်။29 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်ကြည့်ရှုသူများမှမီးခိုးရောင်အသေးပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည်၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများ၏ ဦး နှောက်၌ဤအာရုံကြောပြောင်းလဲမှုများသည်အကြောင်းမရှိကြောင်းသက်သေပြခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကိုကင်း၊ အရက်နှင့်မက်သာဖီတမင်းဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်တွင်တွေ့ရသောအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆင်တူသည်။ ။30 ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျ data တွေကိုပုံမှန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ 2012% အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ကရငျးနှီးဖြစ်ခြင်းကျော်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုနှစ်သက်ဖေါ်ပြခြင်းညစ်ညမ်းတဲ့ 20 သြစတြေးလျလေ့လာမှုအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။31 အထီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဆိုက်ဘာ-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစွဲဖြစ်လာများနှင့်အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားကိုဆုံးရှုံးသောလေ့လာရေးကြီးမားသောမှာဆက်ဆံရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်သိသာ deleterious သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်လူရွယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ရာ၌၎င်း၏အခန်းကဏ္ of အပေါ်အမြင်လွဲမှားစေသည်။ ဤရွေ့ကားပျက်ယွင်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏ပျံ့နှံ့၏အလွန်အမင်းခန့်မှန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်၏ပုံမှန်ယုံကြည်ချက်နှင့်လိင် abstinence ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်သောယုံကြည်ချက်ပါဝင်သည်။32 ဤရွေ့ကားအမြင်များကြောင့် ပို. ခက်ခဲလူငယ်များနောက်ဆုံးမှာပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ခြုံငုံဘဝမကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်သောဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်အတူကြာရှည်ခံ, အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်ဆံရေးဖွဲ့စည်းရန်အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။33
ညစ်ညမ်း, အိမ်ထောင်နှင့်ရေရှည် cohabitating စုံတွဲများအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကွာရှင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းဖို့သူတို့ကိုပိုပြီးအားနည်းချက်အောင်, ဤအလှည့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ကလေးများအတွက်အနုတ်လက္ခဏာကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများရှိပါတယ်။34 အိမ်ထောင်ရေး၏အခြေအနေတွင်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအကြီးအကျယ်ခင်ပွန်းမှချုပ်ထားလျက်ရှိ၏ မယားတုံ့အဆိုပါညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလက်ခံသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်း၏ခင်ပွန်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုလုံးဝသတိမထားမိဖြစ်ခြင်းတစ်ခုရံဖန်ရံခါ Co-ပါဝင်သူဖြစ်ခြင်း။35 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုနေသောခင်ပွန်းသည်များသို့မဟုတ်ယောက်ျားဖက်များပါသောအမျိုးသမီးများသည်သစ္စာဖောက်ခံရသည်ဟုခံစားရသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းပုံစံတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများကသူတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကြည့်နေသောအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်သောအခါ၎င်းတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ကျခြင်း၊ အရည်အချင်းမပြည့်မှီခြင်းခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပြီးလိင်မနှစ်သက်သောခံစားချက်များကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။36 ပိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးညစ်ညမ်းသုံးပြီးသူမ၏ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ချစ်သူရိပ် မိ. , ပိုအနုတ်လက္ခဏာထိုမိန်းမသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သူမကိုကြားဆက်ဆံရေး rates နှင့်အောက်ပိုင်းသူမရဲ့အလုံးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု rates ။37 အထီးညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏သိသာထင်ရှားသောရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ညစ်ညမ်း၏စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု preference ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။38 ညစ်ညမ်းထိုမိနျးမကိုကျော်လူ၏ရုပ်ပိုင်းလွှမ်းမိုးမှုကိုများ၏ concept ကိုအားဖြည့်နိုင်ပါတယ်နှင့်အမျိုးသမီးဆန့်ကျင်ရန်လိုခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်အပြုအမူတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။39,40 2002 ခုနှစ်, Matrimonial ရှေ့နေများ၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီအားလုံးကှာရှငျး၏ 56% ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုဒ်များအတွက် obsessive အကျိုးစီးပွားရှိခြင်းတဦးတည်းပါတီပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။41 ညစ်ညမ်းသုံးပါနှင့်ညစ်ညမ်းကိုလက်ခံသောမိန်းမတို့ကိုအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်နဲ့တွဲပြီးလကျခံဖို့ကပိုများပါတယ်တဲ့သူအမျိုးသားများအတွက်42 အရာနောက်ဆုံးတွင်မိသားစုများ destabilizes ။
ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလက်ခံခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့ကြောင့်ကလေးများသည်ဆိုးကျိုးများစွာခံစားကြရသည်။ ဤဆိုးကျိုးများမှာကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်မငြိမ်သက်မှုတို့ပါဝင်သည်။ ကလေးတွေအပေါ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကလေးသူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ကိုသင်ကြားရန်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်ဘယ်တော့မျှအသုံးမပြုရ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်လူရွယ်များအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လူတို့၏လိင်မှုနှင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့အားကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုမည်သို့ပုံဖော်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုသင်ပေးသည်။ ဤအချက်သည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်စစ်မှန်။ တည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ မိဘများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ကွဲပြားသောကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးနိမ့်ကျပြီးကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ကွာရှင်းခြင်းနှင့်ခွဲနေခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေသည်။
ကလေးများနှင့်မိဘများအတွက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုမိဘများနှင့်ဆွေးနွေးရန်ကလေးအထူးကုများကိုတပ်ဆင်ထားသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အင်တာနက်သည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သောကြောင့်အိမ်သုံးကွန်ပျူတာများသည်အများပြည်သူနေရာများတွင် (ကလေး၏အိပ်ခန်းထဲတွင်မဟုတ်) နေရာချထားသင့်ပြီးထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချရန်အင်တာနက်စီစစ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲများတပ်ဆင်ထားသင့်သည်။ မိဘထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်များကိုမိဘများရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိဆော့ဖ်ဝဲရောင်းချသူများသည်စမတ်ဖုန်းများအားစီစစ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအားယခုအခါမြီးကောင်ပေါက်များအင်တာနက်အသုံးပြုရန်အဓိကအသုံးပြုသောနည်းပညာဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်တာ ၀ န်ခံမှုမိတ်ဖက်များဖန်တီးနိုင်သည့်ဆော့ဝဲလ် ၀ န်ဆောင်မှုများလည်းရှိသည်။ ကလေးသူငယ်များနှင့်ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုယနေ့ကလေးများနှင့်မိဘများအပေါ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်မိသားစုအပေါ်ဤအဖျက်စွမ်းအားကိုရပ်တန့်စေရန်မည်သို့ကူညီနိုင်ကြောင်းကိုနားလည်သင့်သည်။
မူလတန်း Author: အယ်လ်ဒါဝိဒ်သည်ပယ်ရီ, MD FCP
ကလေးအထူးကု၏အမေရိကန်ကောလိပ်မွေးကင်းစကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အထူးပြုတဲ့သူလိုင်စင်ရဆေးသမားများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများတစ်အမျိုးသားရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကောလိပ်၏မစ်ရှင်ဟာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာရောက်ရှိဖို့ကလေးများအားလုံးကို enable ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်ကို filtering software: ပဋိညာဉ်မျက်စိ, Mobicip, Net ကတရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီကနေ့, မျက်နှာပြင် retrieval နှင့် K9 Web ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
ကောင်းသောရုပ်ပုံများမကောင်းပါရုပ်ပုံများ: Porn အထောက်အထားယနေ့လူငယ်ကလေးများ Kristen Jenson နဲ့ GAIL Poyner အားဖြင့်
 www.merriam-webster.com/dictionary/pornography Access6/4/ 15
 www.covenanteyes.com/2012/06/01/how-big-is-the-pornographic-industry-in-the-united-states/ Access6/4/ 15
 ရှင်ပေါလုအမ် Barrett "porn ၏သစ်သမ်မတနိုငျငံ" ဘလွန်းဘာ့ဂ်စီးပွားရေးသတင်းပတ်အစီအစဉ်, ဇွန်လ 21,2012, http://www.businessweek.com/printer/articles/58466-the-new-republic-of-porn Access6/4/ 15
 ဘီလ် Tancer, Click: ပြည်သူ့သန်းပေါင်းများစွာအွန်လိုင်းပွုလုပျခွငျးနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာအရေးကြီးနေအဘယျသို့ (နယူးယောက်: Hyperion, 2008) ။ www.covenanteyes.com/pornstats/ Access4/ 10 / 15
 www.provenmen.org/2014pornsurvey/pornography-use-and-addiction Access6/2/ 15
 ကာရိုး, ဂျေ, Padilla-Walker က, အယ်လ်, Olson, C တို့, Barry, C တို့, Madsen, အက်စ်, မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို XXX ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလက်ခံနှင့်လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထဲတွင်ကိုသုံးပါ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်။ vol ။ 23, အမှတ် 1 ။ ဇန်နဝါရီလ 2008, pp.6-30 ။
 www.psychologies.co.uk/parlament-investigates-online-porn Access6/ 23 / 15
 www.gfi.com/documents/GFI%20_2011_parent_teen_internet_safety_report_june.pdf Access6/ 24 / 15
 မိုက်ကယ် Leahy, porn တက္ကသိုလ်: ကောလိပ်ကျောင်းသားများတကယ်ပဲကျောင်းပရဝုဏ်အပေါ်လိင်အကြောင်းဖြစ်သည်ဆိုကြကဘာလဲ (ချီကာဂို: Northfield ထုတ်ဝေရေး, 2009) ။
 ကေတီစီတီနာ၊ “ လေ့လာမှုမှာဆစ်ဒနီညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကမ္ဘာကြီးကိုဖော်ထုတ်သည်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မေလ ၁၀ ရက်။ http://sydney.edu.au/news/10.html?newsstoryid=2012
 Braun-Courville, ဃနှင့် Rojas, အမ်, လိင်အကဲဆတ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်အပြုအမူမှ Exposure, ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်, 45 (2009) စစ။ 156-162 ။
 ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, Michel ။ ကလေးများနှင့်လူငယ်များအများထဲတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure ၏အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်။ ကလေးသူငယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအလွဲသုံးစားပြုမှု။ 2009 Vol ။ 18: 384-400 ။
 Manning, ကို Jill ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအပေါ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive 2006, 13: 131-165 ။
 Zillman, ဃ, Bryant, ဂျေ, မိသားစုတန်ဖိုးများအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ မိသားစုကိစ္စများ၏ဂျာနယ်, Vol ။9အမှတ်4ဒီဇင်ဘာ 1988, စစ။ 518-544 ။
 Manning, ကို Jill ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive 2006, 13: 131-165 ။
 ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, မိုက်ကယ်။ ကလေးများနှင့်လူငယ်များအများထဲတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure ၏အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်။ ကလေးသူငယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအလွဲသုံးစားပြုမှု။ 2009 Vol ။ 18: 384-400 ။
 Ybarra, အမ်, Mitchell က, K. , ဟမ်ဘာဂါ, အမ်, Diener အဘိဓါန် West, အမ်နှင့်အရွက်, P. X ကို-rate ပစ္စည်းနှင့်ကလေးနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတွေထဲမှာလိင်တက်ကြွအပြုအမူ၏ကျူးလွန်သူ: ငါရှိတယ်တဲ့ Link ကို? ရန်လိုမူအကျင့် vol ။ 37 စစ။ 1-18 (2011)
 Hald, G. အ, Malmuth, N. , နှင့် Yuen, C. ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးသဘောထားများကို: က Non-စမ်းသပ်လေ့လာရေးအပေါ်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်, ရန်လိုမူအကျင့် vol ။ 36, 2010, စစ။ 1065-1086 ။
 ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံဗီဒီယိုများအတွက်တံတားများ, အေ, Wosnitzer, R. , အီး, Sun က, C တို့နှင့် Liberman, R. ကျူးကျော်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကအကြောင်းအရာအားသုံးသပ်ခြင်း Update ကို။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ 16 (10) 2010, စစ။ 1065-1086 ။
 ဗန် Ouytsel, ဂျေ, Ponnett, K. နှင့် Walrave, အမ်, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ပါ Music Videos ၏ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' စားသုံးမှုနှင့်သူတို့၏ sexting အပြုအမူအကြား The Associated ။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ vol ။ 17, အမှတ် 12, 2014, စစ။ 772-778 ။
 Tyden, တီ, Olsson, အက်စ်နှင့် Haggstrom-Nordin, အီး, အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနက် contraceptives, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံခါနီးသဘောထားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်း၏တိုးတက်လာသောအသုံးပြုခြင်း, အမြိုးသမီးမြားရဲ့ကနျြးမာရေးကိစ္စများ, Vol ။ 11, အမှတ်2မတ်လ / ဧပြီ 2001, pp.87-94 ။
 Kuhn, အက်စ်, Gallinat, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူဂျေဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆက်သွယ်မှု Associated, ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု, မေလ, 2014 ။
 ကေတီ Szittner, Sydney.edu "လေ့လာမှု porn စွဲ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကမ္ဘာကဖျောထုတျ" ။ , 10 2012 နိုင်ပါစေ။ http://sydney.edu.au/news/84.html?newsstoryid=9176 Access6/ 14 / 15
 www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/parenting-issues/the-impact-of-family-structure-on-the-health-of-children-effects-of-divorce\_t Access3/ 10 / 15
 Stewart က, DN, Szymanski, DM တစ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်၏ Correlate, ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရိုမန်းတစ်အဖော်ရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလူငယ်လူကြီးအမျိုးသမီးများနေ့အစီရင်ခံစာများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍမေလ 6, 2012 ။ 67: 257-271 ။
 ယောနသန်သည် Dedmon, "သင့်အိမ်ထောင်များအတွက်အင်တာနက်ကိုမကောင်းတဲ့လား? အွန်လိုင်းရေးရာ, ကှာရှငျးအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အခန်းကဏ္ဍကစားညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ။ Dilenshnieder Group မှ, Inc မှ "သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း, နိုဝင်ဘာ 14, 2002 ။ http://prnewswire.com/news-releases/is-the-internet-bad-for-your-marriage-online-affairs-pornographic-sites-playing-greater-role-in-divorces-76826727.html Access6/9/ 15
 ကာရိုး, ဂျေ, Padilla-Walker က, အယ်လ်, Olson, C တို့, Barry, C တို့, Madsen, အက်စ်, မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို XXX ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလက်ခံနှင့်လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထဲတွင်ကိုသုံးပါ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်။ vol ။ 23, အမှတ် 1 ။ ဇန်နဝါရီလ 2008, စစ။ 6-30 ။
စက္ကူဖို့ Link ကို